Wahaabiya: diin iyo dowlad! – Kaasho Maanka
Maxamed Cabdiwahaab waxa uu ku dhashay tuulada Cuyeyna ee aagga Najdi oo ka tirsan dalka maanta loo yaqaan Sacuudi Carabiya taariikhdu markii ay ahayd 1703. Waxa uu diinta islaamka wax ka mid ah ku bartay tuuladaas uu ku dhashay, ka dibna waxa uu waxbarashadiisa ka sii watay Maka iyo Madiina. Dabadeed waxa uu aqoon-kororsi u aadey magaalada Basra ee dalka Ciraaq. Xilligii uu Ciraaq joogey waxa uu la soo baxay aragtiyo xagjirnimo ah oo aan u cuntamin muslimiintii dhulkaas ku dhaqnaa, aragtiyihiis diineedna waxa ay keeneen in laga eryey Basra, waxa uuna ku laabtay dhulkii Najdi ee uu ka soo jeedey. Isaga oo uu filkiisu afartan u dhawaadey buu tuulada Xureymala waxa uu ka bilaabay halgan xagjirnimo oo uu ra’yigiisa ku baahinayey, sababtaas darteedna waxa uu qarka u fuulay in la dilo. Waxa uu ku laabtay tuuladii uu ku dhashay ee Cuyeyna, oo uu amiir ka ahaa nin la oran jirey Cismaan Xamad oo wadaadka soo dhaweeyey.
Diinta iyo dowladdu waa labo arrimood oo aan isxanbaari karin, la mana arag taariikhda dad diin isku xukumay ama diin siyaasadeeyey oo liibaaney. Cumar Khidaab, Cismaan Cafaan iyo Cali Abuudaalib saddexdaba waa la diley, waxa ayna taasi caddayn u tahay in ay nabadgelyadu liidatey oo aysan diintu ammaanka sugi karin. Meel madax lagu laayey shacabku ku ma ay nabad gelayaan. Meel ay dad addoonsadaan dad kale la ma oran karo caddaalad baa ka jirta. Midda kale haddii ay diintu naxariis iyo khayr tahay maxaa ku badiyey dhibaatooyinka? Qofka diinta riman oo siiba diinta wahaabiyada la kardhanayaa nafsad ahaan ciriiri buu ku jiraa, dadka kalena waa uu dhibaa, waayo sida maskaxdiisu u doorsoontay baa halis iyo halaag ah. Dawada keli ah oo ay dadka noocaas ahi leeyihiin waa in la ciribtiro oo meeshii ay ka soo baxaanba laga dabargooyo, maxaa yeelay waa kanser ama kaankaro.
Dal ay wahaabiya joogaan in uu degaa suurtegal ma aha, macquulna ma aha in haddeer dad diin lagu xukumo. Diin la siyaasadeeyaa waxay la mid tahay dawo dhacday oo lagu sumoonayo. Waxa ay qaarkood muujiyaan in ay qunyar-socod yihiin oo aysan raalli ka ahayn gaalaysiinta, qaraxyada iyo dagaalka, ha yeesho ee manhajkoodu waa isku mid Ashabaab iyo kuwooda kale, oo waxa ay wada rumaysan yihiin in diin siyaasadda lagu barxo.
Waxyaalaha ay Wahaabiyadu sheegaan waxaa ka mid ah in la liibaanayo haddii diin la qaato. Waxaa arrintaas beenin ugu filan in dalalka diimaha iyo siyaasadda ka la fogeeyey ay liibaaneen, halka wadannada diin iyo dowlad la isku walaaqaa ay guul-darraysteen. Wax la iska sheegsheego oo qarsoon waxaa ka muhiimsan wax muuqda. Haddii uu xaddiis sheego in aan cudurrada la ka la qaadin waa in la beeniyaa, waayo waxaa cad in cudurrada la ka la qaado. Waxa kale oo ay xagjirku sheegaan in aysan liibaaneyn qoladii ay haweeney u talisaa, sidaas darteedna waxa ay ku andacoodaan in haweenka laga dheereeyo madaxninmada. Waxa aynu maanta aragnaa dalal ay dumar boqorro ka yihiin oo liibaaney iyo waddanno ay ra’iisulwasaare haween ka yihiin oo liibaaney. Sanaddadii danbe waxaa la sheegaa in Norway ay tahay dalka ugu horreeya liibaanta nolosha, waxaana ra’iisulwasaare ka ah qof dumar ah.
Waxyaalaha ay wahaabiyada iyo culimadii soo jireenka ahaa ku ka la duwan yihiin waxaa ka mid ah in ay wadaaddadii hore ku hadli jireen af Soomaali barax la’ oo ay sida bulshadu u hadasho u hadli jireen. Wahaabiyadu waxa ay barakaystaan afka carabiga oo tobankii erey ee uu Wahaabi ku hadlo shan baa carabi ah. Ku hadalka ka sokow siyaalo kale ayey carabiga u barakaystaan. Nin soomaali ah baa waxa uu buug ku qoray (Nebigu ma bililiqo ku nool buu ahaa?), ka dibna qaar Wahaabiyo ah baa waxa ay qoraagaas u eedeeyeen in uu qaniimo ku sheegay bililiqo. Run ahaantii ereyga carabiga ah ee qaniimo af soomaali ahaan waa bililiqo ama boob ama dhac ama hoosh.
Waxaa afka ama codka wahaabiyada ku badan “Qofkii sidaas iyo sidaas yeela naagtu waa ay ka furan tahay, qabuuraha muslimiinta lagu duugi mayo, meydkiisa lagu tukan mayo, dhiiggiisu waa xalaal iwm”. Naag iyo nin isla deggan in la ka la furo wax murti ahi ku ma ay jirto, waxna laga dheefi mayo.. Qofku haddii uu dhinto meel lagu aasayo dan ka ma uu laha oo hadalkoodu waa laqwi aan macne lahayn. Dad dhiiggood marna xalaal ma aha oo xataa qofkii qof dila waxaa fiican in aan la dilin ee si kale loo ciqaabo.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 11th August 2016